Francophonie - "Tandremo ny fofo-kelika" hoy ny Filoha - Vaovao farany
Home / filoha / francophonie / Francophonie - "Tandremo ny fofo-kelika" hoy ny Filoha
Francophonie - "Tandremo ny fofo-kelika" hoy ny Filoha
Azo lazaina fa tena efa vonona tanteraka ny handray ity fivoriamben'ny firenena miteny ny teny frantsay ity Antananarivo
. Vita amin'ny endrika ivelany raitra tokoa ny fotodrafitr'asa rehetra izay handraisana izany fivoriana izany.
Pitsopitsony vitsivitsy sisa no natao tamin'ity herinandro ity raha tsy hilaza afa tsy :
- Ny fandraofana ireo tsy manan-kialofana teny amin'ny arabe;
- Ny fandrindràna ny taovolo an'ireo vadin'olom-panjakana izay nosantarin-dRamatoa vadin'ny Filoha;
- Ny famoahana ny didim-panjakàna vitsivitsy ho fandaminana ny tanàna : ny tsy fivoahana ny trano raha banga ny nify eo aloha, ny fanaovana akanjo fitondra any am-piangonana raha mivoaka, ny tsy fahazoan'ny saretikely mivezivezy eo Ambohitsirohitra, ny tsy fahazoan'ny taxi-be mandeha eny amin'ny totohobato, ny tsy fahazoan'ny scooter manidina eo ambonin'ny "Village de la Francophonie", ny tsy fahazoan'ireo sekta mitoriteny eo amin'ny kianjan'ny 13 mai. Zavatra maro izay nanjary voarara ka mahatezitra ny vahoaka izay efa tsy mankasitraka rahateo ny fitondràna.
Io maraina io, tamin'ny valan-dresaka nataony tamin'ny mpanao gazety dia nampita hafatra sy toromarika ny Filoha (ialàna tsiny satria tsy nahazoan-tsary ary kotsan"ny orana io hariva io ny taratasy nandraisana naoty) : "Ny fofopofona rehetra, na ny amin'ny tongotra na ny amin'ny helika dia antenaiko fa tsy hisy firy. Nifandinika tamin'ireo mpanolotsaiko aho ka hisy ny alamo sy savony hozaraina".
Nampiany torohevitra hoe : "Raha maimbo frôm ianao dia izao atao : rehefa lavidavitry ny olona iny, ohatra, ery amin'ny pilopiotra ery, dia somary hingaina avy ao anaty kiraro ny vody tongotr roa, avoaka kely, ary ahiditra haingana indray mba hivoahan'izay fofona ao, mety misy mitsifotra kely fa tsy olana akory..."
Ankoatr'izay dia nolazainy fa raràna ny mitondra sachet na mambosimbosika rehefa misy fiaraha-misakafo amin'ny vahiny na misy irony antsoina hoe cocktail irony. Handray ny andraikiny arak'izany ny mpitandro filaminana ka hanao fisavàna sachet, hisy koa ny fametrahana fitaovana avo lenta izay mijery ny fihetsiky ny vavan'ny olona ka mandefa hiaka mafy misy kaody izay ren'ny tompon'andraikitra raha sanatria misy mambosimbosika.
Hita amin'izany fa ray aman-dreny mitaiza antsika zanany tokoa ny Filoha.
Francophonie - "Tandremo ny fofo-kelika" hoy ny Filoha Reviewed on novembre 16, 2016 Rating: 5
filoha X francophonie